What is up with ardeyda dugsiyada sare ee Muqdisho? - Politics - Somali Forum - Somalia Online
By Miskiin-Macruuf-Aqiyaar, September 7 in Politics
How come no single student from Muqdisho was among the top ten of highest grades achieved of national examinations? And on the top of that, more 8,000 of 25,000 failed to pass the minimum. I knew many of dugsiyada dalka Soomaaliya inay mashruuc tahay oo lacag lagu cuno and no tayo or quality education ka jirto, laakiin why is affecting Muqdisho kaligeeda ardeyda joogto in higher proportions ?
Dugsiyada Muqdisho oo laga waayay 10-ka ugu darajada sarreeya imtixaanada dalka
Wasaaradda Waxbarashada Dowladda Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay natiijooyinka imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka oo ay ka maqan yahiin iskuulada maamulka Puntland.
Hadal heyn badan ayaa baraha bulshada qabsatay kadib markii ku dhawaad 8 Kun Arday ay ka dhaceen iskuulada Gobolka Banaadir halka Jubbaland iskuuladeeda ay ka dhaceen kaliya 4-qofood, waxaana kala duwanaa tirada gashay imtixaanaadka.
25 Kun Arday oo ku nool Muqdisho ayaa galay Imtixaanaadka, waxaana baasay 17 kun oo Arday, sidoo kale iskuulada Jubbaland in ka yar kun Arday ayaa imtixaanka u fariistay.
Si kastaba iskuuladaa Gobolka Banaadir waa laga waayay 10-ka darajo ee ugu sarreysa iskuulada Dalka, waxaana shanta ugu sarreysa ay ku yaallaan Gobolka GEDO, gobolka Baay ayaa saddex iskuuul ku yeeshay halka Jubbada Hoose iyo Galgaduud ay min hal ku yeesheen.
Dhinaca kale marka laga fiiriyo 10-ka Arday ee ugu darajada badan imtixaanaadka dowladda ee dugsiyada sare 6 ka mid ah waxey wax ka bartaan gobolka Banaadir.
Maybe it was tougher to cheat in Mogadishu compared to the other regions.
11 hours ago, Saalax said:
Or Gedo smarter , or have more time for studies.
Where Mogadishu kids distracted, too much going on.
Even PL, very small towns come top
Corona lockdown, social media specially tiktok iyo waxbarashada Iska liidata
Tiktok laga Yaab!!
Ardeyda Reer Gedo dugsiyada Mandheera, Libooyo iyo Ceelwaaq xad beenaad ku yaalo ayee dhigtaan ama soo dhigteen qaarkood yaa ogaado. Waxbarashada ka jirto in those deegaano wey ka sareysaa kuwa hadda ka jiro meelo badan gobollada kale if we need to be honest.
Absolutely true, many Somali Sijui, Kenyan teachers, many also go UN funded schools for refugee near border, this was also a big campaign by this community to invest more in education
Haloo hambalyeeyo, hana lagu daydo
Intaan ogahay iyo intaan naqlay lama sheegin taariikhda muqdisho oo ku guulaysta kaalinta koowaad.
Maxay tahay sababtu?
Aragtidayda muqdisho waxaa ku badan entertainment'ga ama xiiso gelinta dhalinyarada.
Wakhtigaygii hore ma jirin social media dadka hoos u foorariya, laakiin waxaa jiray waxyaabo kale oo wakhtiga la joogay la mid ahaa.
Waxaan xasuustaa ciyaalnimadii muqdisho, intaan iskoolka dharkiisa soo xirino hadana aan garab marno oo meelo fog-fog "qooley" kasoo dayna, reerkiina iskool inaan aadnay bay nagu ogaayeen.
Goboladu ayagaa mar walba qaadi jiray kaalinta koowaad wax kale oo lagu madhquulo na lahayn
Hadii macalimiintu yaraato waxaa booska koowaad geli jiray kuwa kaalimaha sare ka gala maadooyinka qaarkood siiba kuwa adag, waxayna u noqon jirtay labada sano ee shaqada qarranka.
Reer puntland waa dad qiimo badan kuna horayn jiray wax barashada siiba gobolka bari iyo mudug.
Wixii sagaashankii ka dambeeyay is badel wayn baa ku dhacay xagga wax-barashada, dhaqanka, iyo siyaasadda.
Dhanka wax barashada waxaa wax lagu noqon karaan markaad jamhuuriyad wayn aad manhaj la wadaagto meel gaara baa lagu ootay.
Dhanka dhaqanka taariikhda lama sheegin ilmo aan qaan-gaarin ayadoo lagu kufsado goboladooda.
Dhanka siyaasadda waxay hogaan ka dhigan jireen nin ay yaqaanaan dhiig ahaan iyo asal ahaan meeshuu kasoo jeedo haduu doono ha madax adkaado.
"arri-joog" lagama hayo waana khatarta maanta ka muuqata maamulkooda.
On 9/9/2020 at 6:47 AM, gooni said:
Puntland baad ku khafiiftay ma istiri? Meelaan Puntland looga hadlayn baa soo galinaysaa. Cudurka ku hayaa waynaa.
Maya walaal, kuma khafiifin puntland wax wayna ima hayaan.
Mowduuca waxaa puntland soo geliyay adeerkaa deni oo xaqiray wiil da'yar oo dadaalay kuna sheegay inuusan istaahilin guushaas.
Ogowna mawduuca uu xamar u joogo wax barasho ma'ahan waa in doorasho wakhtigeeda ku dhacdo.
Ma qabo meel ka hoosaysa oo nin fariisto inay jirto, aad baana uga xumahay inuu reer puntland matalo.
Taasu waa mid...
Waxaan hubaa haduusan caruurta soomaaliyeed kala soocin manhajkoodana mideeyo in kuwa puntland ugu horayn lahaayeen, waan soo joogay wakhtiyo ay dhacday sananadihii hore.
Adiga waxaa kula gudboon inaad maskaxda ka xorowdo dalku wakhtiguu joogo dhaqanka loo baxsadaa.
Doorashada soo socota puntland wax ha laga badelo.
Waa in dadku doortaan nin aan microphone'ka ku midab ahayn cahdi ama balan leh.
Dadkana ku dhiig ah oo masuul soomaaliyeed u qalma.
19 hours ago, gooni said:
Puntland cida ay dooranayso iyaday jirtaa. Waxaan kuu ogahay qofkuu rabo ha ahaadee inaan loo meerinayn waxa danteedu kijirto.
14 hours ago, Mastermind said:
Pay no mind to Gooni niic-badan. He is only frustrated that useless Farmaajo days in office are numbered and he foolishly blames Puntland for it.
Saaxiib, Gooni, Farmaajo’s incompetence and lack of leadership is why he will not get a second term. So enjoy your quule and limit the niic for a few more months...
19 hours ago, Mastermind said:
Gedo waxay ku taalaa meesha ay qoraxdu u dhacdo
Gobolka bari oo uu ku dhashay deni waxuu ku yaalaa meesha qoraxdu kasoo baxdo.
Cidii soo dooratay may waydiyaan maxaa halkaas fog ku geeyay?
Adeer puntland cidda ay dooranayso waa inay taqaano in soomaaliya la wada leeyahay dhiiri gelin iyo xanaf la'aana umadda lasoo hor istaagtaa.
Hadii ay ku adkaato arintaasna waa inuu ugu yaraan yaqaan wuxuu gaarka u leeyahay.
Farmaajo insha-allah ha tago.
Nin kale unbaa imaan.
Ninkaas imaan doona puntland ama waa jeclaan ama waa necbaan waa un labadaas waxa laga sugaa mar walba.